Umaka: i-mailchimp | Martech Zone
NgoMgqibelo, Novemba 27, 2021 UMsombuluko, May 16, 2022 Douglas Karr
Lokhu kungase kubathukuthelise abanye abantu embonini yami, kodwa izinkampani eziningi zimane nje azinayo imodeli esekela ukutshalwa kwezimali kuhlelo olukhulu lokuthunyelwa kwesayithi kanye nesu lokumaketha okuqukethwe. Ngazi amabhizinisi amancane ambalwa asangena indlu ngendlu noma ancike emazwini omlomo ukuze asekele ibhizinisi elihlaba umxhwele. Ama-Phonesites: Qalisa Amakhasi Ngamaminithi Wonke ibhizinisi kufanele lilinganisele isikhathi somnikazi walo, umzamo, kanye nokutshalwa kwezimali ukuze kukhiqizwe inqubo yokuthengisa esebenza kahle kakhulu ukuletha
NgoMsombuluko, Novemba 22, 2021 UMsombuluko, May 16, 2022 Douglas Karr
I-LeadPages iyinkundla yekhasi lokubikezela ekuvumela ukuthi ushicilele amakhasi okufikela ayizifanekiso, aphendulayo ngokuchofoza okumbalwa kwawo. Nge-LeadPages, ungakha kalula amakhasi okuthengisa, amasango okwamukela, amakhasi okufika, amakhasi okuqalisa, amakhasi aminyanisa, ukuqalisa amakhasi maduzane, amakhasi wokubonga, amakhasi enqola, amakhasi athengisiwe, amakhasi ami, amakhasi ochungechunge lwezingxoxo nokunye... kusuka phezulu 200+ izifanekiso ezitholakalayo. Nge-LeadPages, ungakwazi: Dala ubukhona bakho ku-inthanethi - dala
NgoLwesihlanu, ngoJuni 4, i-2021 UMsombuluko, May 16, 2022 Douglas Karr
ULwesithathu, April 28, 2021 UMsombuluko, May 16, 2022 UDmytro Spilka